Rita, Writing for My Sake!: ပံ့သကူ (၂) - မောင်သစ်ဆင်း
Posted by Rita at 3/27/2010 12:04:00 AM
ကောင်းလိုက်တာ...လူ့မနော၊ စေတနာ နဲ့ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရှင်းရှင်းလေး ရေးသွားတာ ကောင်းလိုက်တာ...ပြန်လည် ဝေမျှတာ ကျေးဇူး ညီမ ရီတာရေ...:)
စာတွေ ပြန်ရိုက်ပြီး မျှဝေ ပေးတာ ကျေးဇူး...း))
လာဖတ်ကြတဲ့ မမတို့ကိုလည်း ကျေးဇူး။
ဆရာမောင်သစ်ဆင်း စာတွေကို ကြိုက်လို့ ဒီတိုင်း scan နဲ့ မတင်ဘဲ ရိုက်ပြီးတော့ကို တင်ချင်မိတာ။
တစ်နေကုန် အပြင်သွားနေရလို့ ခုမှလာဖတ်ရပါတယ် ရီတာရေ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပါလားလို့ ဖတ်ပြီးပြီးချင်း မှတ်ချက်ချမိပါတယ်။ ခုလိုတကူးတက သေချာပြန်ရိုက်ပြီး တင်ပေးတဲ့ရီတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
ကောင်းလိုက်တာ... ကျေးဇူးပါ မမရီတာ... :)
ဆရာ မောင်သစ်ဆင်းစာတွေကို တအားကြိုက်တယ်။ မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲဗျို့။
ကိုယ့်စိတ်အရ အဖွားလေး ထိုင်ငိုချလိုက်တာကို
ဘဝ သရုပ်ဖော်တွေနဲ့ ကျနော်နဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်းထင်ရဲ့
ဘဝ သရုပ်ဖော်လို့ ကိုယ် တခါမှ မတွေးခဲ့မိဘူး ဖြိုးမော်ရဲ့။ =)
That word made me crazy.
Sorry for out of my comment relating this post item.
နောက်ဆုံးမှာ မထင်မှတ်တဲ့ အလှည့်အပြောင်းလေး ပါတာတွေဆို သဘောကျတယ်ကွဲ့။